IPhilips 273B9, isilawuli esithuthukisa ukusebenza ngocingo [Ukuhlaziya] | Izindaba zamagajethi
UPhilips uyaqhubeka nokusebenzisana neMMD ekwenziweni nasekukhuthazweni kwama-PC monitors azo zonke izinhlobo. Kulezi zikhathi, abaqaphi abanobukhulu obuphakathi kwama-intshi angama-24 no-27 bathola ukugqama okukhethekile ngenxa yokwanda kokusebenza ngocingo, futhi kulapho-ke lapho sivela khona e-Actualidad Gadget ukukusiza ukhethe indlela engcono kakhulu.
Siletha etafuleni lokubuyekeza iPhilips 273B9 entsha, isilawuli esigcwele se-HD esinokuxhuma kwe-USBC okuzokusiza ukuthi usebenze ngamandla nge-teleworking. Sizobheka ngokuningiliziwe izici zayo zobuchwepheshe futhi ikakhulukazi lokho isipiliyoni sethu obekukhona ngesikhathi sokuhlolwa okwenziwe.
2 Ukusebenziseka kalula kwe-teleworking
3 Izici zobuchwepheshe
4 Ubuningi bokuxhuma nokusebenza
Kulokhu, uPhilips ukhethe ukwakheka okunengqondo, Yize kufanele sisho ukuthi ifemu ivame ukubonakala ngokwenziwa kwamadivayisi anokuthakazelisa okuncane ngokwedizayini noma ngezinto zokwakha, lokhu kuhlala kusinika ukuthembeka, ukumelana nokuzithiba ezindaweni ezithile zomsebenzi.
Kulokhu, uPhilips ukhethe iplastiki emnyama emnyama kanye nozimele abancishiswe kakhulu phezulu nasezinhlangothini. Akunjalo engxenyeni engezansi lapho kutholakala khona ezinye izinzwa esizokhuluma ngazo ngokuhamba kwesikhathi.
Thenga i-Philips 273B9 qapha> LINK
Isisekelo esikhulu kakhulu esiseselula futhi esifaka isitsha esincane, esifanele ama-pen geeks. Ikhiphedi itholakala engxenyeni engezansi kwesokudla futhi inohlelo olulula lwe-HUD lokho kuzokhonjiswa esikrinini lapho sicindezela ngamunye wabo. Ukuxhumeka kungemuva konke kutholakala endaweni efanayo.
Ubukhulu: 614 X 372 X 61 mm
Isisindo: 4,59 Kg ngaphandle kwe-stand / 7,03 Kg ngesitandi
Isitendi siboshelwa kalula nje ngokusebenzisa inkinobho eslayidayo. Uma sesibekiwe sizokwazi ukubeka i-monitor lapho sifuna khona. Sineqapha elibukeka kahle cishe kunoma iyiphi indawo yokusebenza ngisho nasehhovisi lethu "lasekhaya".
Ukusebenziseka kalula kwe-teleworking
Insika eyisisekelo yokunethezeka kwaleli qapha iqala kusukela phansi lapho ukusekelwa kwayo kuzosivumela ukuthi silungise ukuphakama kuze kufike kumamilimitha ayi-150 ngokuma mpo. Ukucaciswa kuzosivumela ukuthi silungise ukuqapha kuzungeze ama-degree angama-90 kuya kuma-30 degrees ukuthambekela phansi okuhlobene nokuma mpo.
Ngokwengxenye yayo, isisekelo siyiselula, siziphendulela kalula, enye insika ebalulekile lapho sifuna ukuba nomqaphi ekhoneni letafula ngoba sisebenza ngasikhathi sinye nokuqukethwe kufomethi yamaphepha kanye nedijithali.
Ngokwengxenye yayo, endaweni ebambelela esisekelweni sizothola izikulufo ezine ezizosisiza ekufakweni kosekelo ngokuhambisana I-VESA, ngamanye amagama, izinyathelo zendabuko okulula ukuzithola nganoma yisiphi isikhathi sokuthengisa. Kodwa-ke, sathola isimanga. Ithole ngentengo enhle ku-Amazon (isixhumanisi).
Lezi zikulufo ziyibanga elifushane, ngakho-ke singafaka kuphela i-adaptha ye-VESA enezilinganiso eziqondile, Ngamanye amagama, ngeke sikwazi ukusizakala nge-adaptha yezinyathelo eziningana ngoba lezi zikulufo azizide ngokwanele. Siyixazulule le nkinga ngokuthola izikulufo zosayizi ofanayo kepha ezinde.
Manje siya kwezobuchwepheshe kuphela, futhi siphambi kwesiqapha I-MMD IPS LCD enamasentimitha angu-27 (68,6 amasentimitha). Inokumbozwa okulwa nokubukeka kwe-matte okwenza kube kuhle kuzo zonke izimo, futhi kuvimbela ukubhoboka ngo-25%, ngokungangabazeki kuyisiqaphi sempi esizohlanzwa kalula.
Mayelana nesinqumo, UPhilips ukhethe i-1080p (i-HD ephelele) ngezinga eliphakathi nendawo lokuvuselela elimi ama-75 Hz, lokhu kusenza sithole Ukubambezeleka okungu-4ms .
Ngokuqondene nokukhanya, kuhlala kwizibalo eziphakathi ze- Izinombolo ezingama-250. Sinama-98% wephrofayili ye-sRGB kanye nama-76% avela ku-NTSC.
Manje siqokomisa iPowerSensor, uhlelo lwezinzwa ngaphansi kophawu lwePhilips oluzosivumela ukuthi sikwazi ukubona lapho siphambi kwesiqaphi futhi sinqume ukuthi singena nini kumodi "yokulala" ngaphandle kwesidingo sokuthi siyitshele, okuzonciphisa kakhulu ukusetshenziswa kwamandla, ikakhulukazi ezindaweni Ihhovisi. Sithole ukuthi isebenza ngaphezu kokulungiswa, ubude obuguquguqukayo nobungenziwa ngezifiso.
Ubuningi bokuxhuma nokusebenza
Mayelana nokubona, sesivele sicacile ukuthi indawo yokusebenza ingaphezulu kokumboziwe, kepha kuningi esisazokukhuluma ngakho. FUTHII-ste Philips 273B9 yakhelwe ukunqoba zonke izinhlobo zobunzima, futhi ikhombisa ekuxhumaneni kwayo.
Umsindo ngaphakathi / Umsindo uphumile
I-2x USB 3.1 ene-Power Delivery
2x i-USB ejwayelekile
Ibhokisi lifaka imbobo ye-HDMI, i-DisplayPort ne-USB-C enobuchwepheshe be-DisplayPort 3.0. Namuhla izincwadi eziningi zokubhala izincwadi ziza ngqo nezimbobo ze-UBSC futhi akukho okunye, njengakwiMacBook Pro 16 ″ ebesiyisebenzisa ukuhlola, futhi lokhu kube yinjabulo enkulu.
Imbobo ye-USB-C yokuqapha izonikela ngokufika kuma-60W ekhokhwayo kwi-laptop esiyixhuma, ngasikhathi sinye lapho izothola isithombe ku-Full HD resolution. Kodwa-ke, le nto ayikho lapha, sikuqinisekisile ukuthi iPhilips 273B9 isebenza njengechweba le-HUB, ukuze sikwazi ukuxhuma ikhibhodi yethu futhi igundane ngqo kwi-USB yokuqapha ukusebenzisa incwajana, futhi uxhume noma yiluphi uhlobo lwesitoreji esikhulu.
Kusobala ukuthi sibhekene nomqaphi "wempi", owenzelwe ukunqoba izimo ezahlukahlukene ngaphandle kokuma endaweni ethile, ngaphandle kokukhanya kakhulu cishe kunoma yisiphi isici, kepha sinikeza ukuhlanganiswa kokusebenza okunzima ukufana nakwezinye iziqaphi. Umphumela uyintengo okuthi, ngaphandle kokuvinjelwa, ikude nebanga eliphansi. Noma kunjalo, Uma sibheka ukuthi isebenza njenge-USB-C HUB, enikezela nge-60W imali ekhokhwayo kwi-laptop futhi ine-SmartErgoBase, kubukeka njengokutshalwa kwemali okuhle kakhulu.
Ungayithola kuwebhusayithi esemthethweni ye- Philips, noma ngqo ku-Amazon kusuka kuma-euro angama-285.
Ukuxhumeka okuningi kwazo zonke izinhlobo ngemuva
SmartErgoBase ukusivumela ukhululekile ukusetshenziswa isikhala
Iphaneli elungiselelwe kahle, elijwayelekile lePhilips
Mhlawumbe ukwakheka okunengqondo
Kudinga ukumiswa okuthile ukusizakala nge-USB-C HUB
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » IPhilips 273B9, isilawuli esithuthukisa ukusebenza ngocingo [Ukuhlaziywa]
I-Chromecast ene-Google TV, ukuhlaziywa, intengo nezici
I-WeTransfer: iyini futhi isebenza kanjani?